Okwu mmalite nke ahịhịa na-emepụta fatịlaịza - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Usoro nhazi na imepụta dum ahịhịa na-emepụta fatịlaịza. Mmepụta akara igwe tumadi na-agụnye a abụọ-axis igwekota, a ọhụrụ organic fatịlaịza granulator, a ala draya, a ala ngwa nju oyi, a ala sieve igwe, a vetikal yinye crusher, a belt ebu, akpaka nkwakọ igwe na ndị ọzọ inyeaka ngwá.
Enwere ike iji fatịlaịza nke ahịhịa metro, ihe mkpofu ugbo, anụ ụlọ na anụ ọkụkọ na mkpofu obodo. Ekwesiri ka emeghari ahihia ahihia ndia tupu emegharia ya na nri ndi ahia nke ahia. Ntinye ego nke ịtụgharị ihe mkpoba n'ime akụ bara uru.
Organic fatịlaịza mmepụta akara adabara:
- Nwepụta nke fatịlaịza nsị anụ ehi
- Nrụpụta nke fatịlaịza nsị ehi
- Nrụpụta nke fatịlaịza nri fatịlaịza
- Imewe nke ọkụkọ na ọbọgwụ nri organic fatịlaịza
- Atụrụ nri fatịlaịza n'ichepụta
- Organic fatịlaịza n'ichepụta mgbe ọchịchị nsị n'efu ọgwụgwọ .。
1, Nri anụ: nsị anụ ọkụkọ, nri ezi, nri atụrụ, nsị ehi, nsị ịnyịnya, nri oke bekee, wdg.
Usoro mmeputa nke fatịlaịza na - agụnye: egweri akụrụngwa ment gbaa ụka → inggwakọta nke ihe ndị ọzọ (na - agwakọta ya na ihe ndị ọzọ na - arụ ọrụ, NPK≥4%, ihe a na - ahụkarị ≥30%) → nkwakọ ngwaahịa. Mara: usoro mmepụta a bụ maka ntụnye naanị.
Organic fatịlaịza mmepụta akụrụngwa na-agụnye gbaa ụka akụrụngwa, abụọ-axis igwekota, ọhụrụ organic fatịlaịza granulation igwe, ala draya, drum oyi, drum screening igwe, silo, akpaka nkwakọ igwe, vetikal yinye crusher, belt ebu, wdg
Organic fatịlaịza usoro:
1) gbaa ụka usoro
Drough-type dumper bụ ihe a na-ejikarị eme ihe gbaa ụka. Ihe nkpuchi kpochapuru nwere okwute gbaa ụka, egwu ije, sistemu ike, ngwa mwepu na sistemụ ọtụtụ. Akụkụ a na-atụgharị anya na-agba ọsọ site na rollers dị elu. Hydraulic flipper nwere ike ịrị elu ma daa kpamkpam.
2) granulation usoro
A na-eji ụdị granizer fatịlaịza ọhụrụ eme ihe na granulation. Ọ bụ a pụrụ iche granulator maka akụrụngwa dị ka anụmanụ nsị, ire ere mkpụrụ osisi, peels, raw akwụkwọ nri, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ fatịlaịza, oké osimiri fatịlaịza, ugbo fatịlaịza, atọ wastes, microorganisms na ndị ọzọ organic n'efu ihe. Ọ nwere uru dị elu nke ọnụ ọgụgụ granulation, arụmọrụ kwụsiri ike, akụrụngwa na-adịgide adịgide na ndụ ogologo ndụ, ọ bụkwa ezigbo nhọrọ maka ịmịpụta fatịlaịza organic. Oflọ nke igwe a na-ejide ọkpọkọ na-enweghị ntụpọ, nke na-adịgide adịgide ma ọ naghị emebi. Tinyere n'ọdụ ụgbọ mmiri nchebe, ọrụ nke igwe ahụ dị mma. Mkpokọta ike nke ọhụrụ organic fatịlaịza granulator dị elu karịa nke disk granulator na drum granulator. Enwere ike gbanwee urughuru ya dika ihe ndi ahia choro. The granulator bụ ihe kasị mma maka kpọmkwem granulation nke organic n'efu mgbe gbaa ụka, na-azọpụta ihicha usoro na ukwuu mbenata mmepụta-akwụ ụgwọ.
3) ihicha na jụrụ usoro
Na urughuru mmiri ọdịnaya mgbe granulation site granulator dị elu, n'ihi ya, ọ chọrọ ka a kpọrọ nkụ izute mmiri ọdịnaya ọkọlọtọ. A na-ejikarị draya eme ihe iji kpoo irighiri mmiri ụfọdụ na iru mmiri na mmepụta nke fatịlaịza na-emepụta fatịlaịza. Na urughuru okpomọkụ mgbe ihicha bụ dịtụ elu, na ọ ga-mma iji gbochie fatịlaịza si clumping. A na-eji oyi mee ihe maka ihe ndị na-eme ka ihe dị jụụ mgbe ihichachara ma jiri ya na draịyer rotary, nke nwere ike ime ka arụmọrụ dị mma, belata ike ọrụ, mụbaa mkpụrụ, wepụkwuo mmiri nke ahụ ma belata okpomọkụ fatịlaịza.
4) usoro nyocha
Na mmepụta, iji hụ na ịdị n'otu nke ngwaahịa emechara, a ga-enyocha ahụ tupu nkwakọ ngwaahịa. Ala sieving igwe bụ a nkịtị sieving akụrụngwa na mmepụta usoro nke onyinye fatịlaịza na organic fatịlaịza. A na-eji ya ikewapụta ngwaahịa ndị agwụchara na agwakọta na-ekwekọghị ma mezue ngụkọta nke ngwaahịa ndị emechara.
5) usoro nkwakọ ngwaahịa
Mgbe emechara igwe nkwakọ ngwaahịa ahụ, ike ndọda na-amalite ịrụ ọrụ, na-eburu ihe ahụ n'ime ihe eji eme ihe, ma tinye ya n'ime akpa site na hopper na-eri ihe. Mgbe ibu ahụ ruru uru ndabara, ike ndọda na-akwụsị ịgba ọsọ. Onye na-ahụ maka ọrụ na-ewepu ngwugwu ngwugwu ma ọ bụ tinye akpa nkwakọ ngwaahịa na onye na-ebu belt na igwe eji akwa akwa.